Baarlamaanka Soomaaliya oo ka dooddi doona heshiiska Soomaaliya iyo Itoobiya – Kalfadhi
Baarlamaanka Soomaaliya oo ka dooddi doona heshiiska Soomaaliya iyo Itoobiya
Wasiirka warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Daahir Maxamuud Geelle oo maanta shir jaraa’id ku qabtay caasimada Muqdisho waxa uu sheegay in heshiiska ay Itoobiya ku maalgelineyso afar dekad oo ay Soomaaliya leedahay la hor geyn doono baarlamaanka.
Labada Gole ee baarlamaanka ayaa cod gelin doona heshiiska oo ay si wada jir ah u saxiixen madaxweyne Farmaajo iyo raysul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed.
‘’ Heshiiska maalgelinta dekadaha waxaa la hor geyn doonaa baarlamaanka Soomaaliya kadibna waxaa saxiixi doona madaxweynaha oo faafin rasmi ah ku soo saari doona,’’ ayuu yiri wasiir Geelle.
Dad badan oo ay ku jiraan siyaasiyiin iyo aqoonyanno ayaa shaki weyn gelinaya heshiiskan oo lagu maalgelin doono afar dekad oo Soomaaliya ku yaalla inkastoo weli aysan cadeyn qarashka ku bixaya.
“Waa la isku afgartey in dekado la sameeyo, dekadahaas afar dekadood ayey noqonayaan oo ballaaran oo maalgashi loo raadiyo, maalgashiga waxa laga yaabaa dadka markey maqlaan in labada dowladood ay maal gelinayaan laakiin hay’adaha maalgelinta adduunka iyo dowlaha wax maalgashado iyo shirkadaha waaweyn iyo shakhsiyaadka labada dal ka soo jeeda intaba waxa ay noqonayaan kuwo maal gashan kar,” ayuu u sheegey warbaahinta Mudane Daahir Geelle mar uu ka hadlaayey arrimaha muranka badan dhaliyey ee la xiriira heshiishka labada dal ee dhinaca dekedaha.
Dhinaca kale,Somaliland ayaa caddeysay in dekadda Berbera aysan ku jirin dekadaha ay Soomaaliya iyo Itoobiya ka wada hadlen maalgelintooda.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa weli ku maqan fasaxii maalmaha ciidul Fidriga.
Soomaaliya oo shir caalami ah uga qeybgalaysa Norway
Soomaaliya oo la soo wareegtay maamulka hawadeeda 27 sanno kadib